Swayipha izimpawu zokungena zokuhweba
Umthengisi we forex terkenal indonesia
Swayipha izimpawu zokungena zokuhweba - Izimpawu swayipha
1) Zonke izimpawu zokuhweba izakhiwo zabanikazi abafanele. Eqinisweni, kungase kuphele izinsuku ogulayo engalali kodwa engaphelelwa amandla.
Izimpawu ezilandelayo zisetshenziselwa ukubonisa imiPhumela yokuFunda, AmaZinga okuHlola, amaBanga, iKhodi, isiLinganiso, IziNcazelo zamaKhono, OkuQukethwe neSimo: = UmPhumela wokuFunda = AmaZinga okuHlola = IBanga = IKhodi = isiLinganiso = IziNcazelo zamaKhono = OkuQukethwe neSimo. Swayipha izimpawu zokungena zokuhweba.
IsiZulu Ulimi Lwasekhaya ( HL) / P1 6 DoE/ Februwari – Mashi NSC – Imemorandamu Akuvumelekile ukukopisha leli phepha ANNEXURE B IRUBHRIKI YOKUFINGQA Amamaki ayonikezwa kuphela uma kufingqwe ngemisho ephelele nangamagama akho noma ngamaphuzu. Zontathu lezizimpawu zithi hamba uyolungisa uma kuyi ABS isuke ikutshela ukuthi hamba uyokhanda iziqhobosho ezilekelela ukuthi imoto ingashishilizi uma kufanele ime ngokushesha ikakhulukazi esimweni somgwaqo omanzi. Kolimi ( Izimpawu zokuloba) 2 amahora IK P191 IY PIZWE LAKITHI ISIFUNDO A Ukulalela nokukhuluma • Ukulalela ngokuqondisisa • Ingxoxo ngaphanbikokulalela • Ngesikhathi sokulalela • Ingxoxo ngemuva kokulalela • Ingxoxo yamaqembu • Ukucwaninga • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa. Izimpawu ( signs) nama- symptom Ukukhwehlela kwanoma isikhathi esingakanani Ujuluka kakhulu ebusuku Ukwehla kakhulu kwesisindo somzimba Ifiva ( umalaleveva) Ukungathandi ukudla Ukukhathala nokuphelelwa amandla Ukukhwehlela igazi Ukuphelelwa ngumoya lapho uphefumula Izinhlungu esifubeni.
Asikuvezele izinto ezivame ukukunika izimpawu ezithi hamba uxwayile. Izimpawu zokuloba) • Ukusebenzisa isichazamazwi 2 amahora IK P2 IY P1 ISIFUNDO B Ukufunda nokubukela • Ukufunda indaba emfushane • Ingxoxo ngaphambi kokufunda • Ukucabanga ngombhalo azifundele ngokwakhe • Izindlela zokufunda.
Ukusetshenziswa ongaphakeme isinqumo logo izithombe kule lokusebenza for ukusetshenziswa umazisi efanelekela " Fair Sebenzisa" ngaphansi komthetho welungelo lobunikazi. Uphawu lwe ABS, isipanela nophawu lwenjini.
IsiZulu Soqobo Gr4 Tracking & Planning. Olunye uphawu lokucindezeleka okuguquguqukayo ukuziphatha okuyingozi kakhulu ngaphandle kokunaka imiphumela.
Izimpawu zayo zingase zihlanganise imicabango engahlelekile, ukukhulumela futhi nokungabi nabuthongo.
I forex isayina umshini wokulanda mahhala